Homeसमाचारकस्तो होला कमिलाको अचार ? फाइदा जान्नुहोस्
December 16, 2020 admin समाचार 8670
तपाईंले प्याजको अचा’र (चटनी), टमाटरको अचार वा धनियाँको अचार खानु भएको होला वा यस’बारे सुन्नु भएको होला । तर के तपाईंले कहिल्यै कमि’लाको अचार (चटनी) हुन्छ भनेर सुन्नु भएको छ ?
खासमा भारतको झार’खण्डस्थित जमशेदपुरको एउटा गाउँमा बस्ने आदि’वासीले राता कमिला (लाल चींटी) को अचार (चटनी) बनाएर खाने गर्दछन् । भोक र चिसोबाट बच्न भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानिय आदिवासी राता कमि’लको अचार खाने गर्दछन् ।
आदिवासी समाजका अनुसा’र चिसो मौसममा राता कमिलको अचार खाएमा यसले चिसो लाग्नबाट बचाउनुको साथै भोक समेत जाग्ने गर्दछ । स्वास्थ्यका दृष्टिको’णले समेत राता कमिलामा पाइने टेटरकी एसिडले शरीरमा निकै ला’भ पुर्याउने गर्दछ ।-खबरहब बाट
March 5, 2021 admin समाचार 5791
June 12, 2021 admin समाचार 5435
June 18, 2021 admin समाचार 4656
मङ्गलबार दिउँसो हेलम्बु गाउँपालिका–१ को रितेकतेकमा पहि’रोले खोला थुनिएर एक्का’सि खुल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको हो । रितेकतेकमा मेलम्ची खोला दुई पहाडबी’चको खोँच भएर बग्ने र खोला थुनिएर फुटे’कोजस्तो देखिएको हेलिकप्टरबाट अवलोकन गरेर